Umhla My Pet » 12 Kufuneka izityebi Kuba Mrs. Kunene
1. Umntu engaziva ubomi bakhe ngeli makubekho ulungelelwano. Makube ulwalamano lwakhe uthando, nosapho lwakhe, umsebenzi wakhe, yena okuvolontiya. Umntu engaziva nobu waphila ubomi aphefumlelweyo. Sonke Ungasebenzisa ubakhuthaza kancinane.
2. Umntu lowo isibindi ukuba ubuthathaka xa kuyimfuneko naxa uqinisekile kuyimfuneko. Ukhetha ndityhile abo chemistry naye kodwa akwazi ukuzoba imida ecacileyo xa kuyimfuneko.
3. Umntu uyakwazi kuba wena. Umntu ongenayo ukutsibela kumgwebi kodwa azabalazele ukuqonda omda- ngumntu omnye ngubani melana ukuba.
4. Umntu incoma 3 iimpazamo inditya wena uncoma zabo 3 iimpazamo mandundu. Mvi ngundoqo. Funa umntu okwaziyo negalelo kubomi bakho njengoko usenza ebinazo. Long checklists ngosuku lo yokukhulula; yeyona chain okubhetele.
5. Umntu okhetha ukuba abe nobubele kunokuba kunene. Ukususela le weyitala kumntu abangenamakhaya esitratweni wozibalela.
6. Umntu onokuthi yena buhlungu. Ndifumanisa ukuba ukulungele ukuvuma iimpazamo linyathelo lokuqala impiliso. amaxesha amaninzi, oko kwanele olungileyo.
7. Umntu okwaziyo conversationalist olukhulu. Wena nje Ndiyakuthanda ukuthetha kuye kuba njalo multi-xhaka yaye umdla.
8. Umntu yadalwa ukwazi. Yena imibuzo phantse yonke into, ukukhathalele ekuphuculeni aze akayeki ukufunda.
9. Umntu ofuna ukuya nakumaxesha anzima kunye nawe. Yena ubenokuqina ukuba ime bakunike inkxaso xa izinto zihamba ezantsi.
10. Umntu onyamekela kakuhle izilwanyana zakhe. Utitsahala uyaqinisekisa ukuba zisempilweni, acocekileyo kunye bonwabile. Ukuba izibanga uyazithanda izilwanyana zakhe kodwa zikwimeko ye zidlakadlaka, Ucinga ukuba uyakuthanda? Ufumana belishiya yam.
11. Umntu gqolo owenza izinto encinane na kuni. Ngosuku ngemihla nokuzinikela ukwenza ezi zinto uthi kakhulu.
12. Umntu lowo iimbono mali ezifanayo. Ufuna ukwakha ikamva mali ezinzileyo ukuze nawe unandiphe ulwalamano lwakho. Into yokugqibela ofuna ukuyenza umlo malunga nemali.